" Wadaaddada iyo Somaliland WQ Maxamed Kaahin Saleebaan
Wednesday June 13, 2018 - 07:38:36 in Maqaallo by Wariye Tiriko
" Wadaaddada iyo Somaliland WQ Maxamed Kaahin Saleebaan Halgankii ay Mujaahidiintii SNM ku xoreeyeen Jamhuuriyadda Somaliland, kuna gambiyeen Rajiimkii diinta iyo dadkaba gumeeyey ee Ina Siyaad Barre, waxay Culimada Somaliland fatwoodeen, haddana ay ka aaminsan yihiin (marka laga reebo xubno ka tirsanaa ururkii Waxdadda la odhan jiray iyo dhowr wadaad oo kale) inuu ahaa dagaal fidmo ah, oo lagu naar mutaysanayo, iyagoo ku doodaya inay labo qolo oo muslimiin ahi islaayaan inay xaaraan tahay. Kaddib markii ay Somaliland dib u heshay xorriyaddeedii, waxa dhacay dagaallo badan oo Ciidamada Somaliland iyo Somaliya ku dhex maray deegaanno udhow xuduudda labada dal kala soocda, kuwaas oo ay mar walba Somaliland daafacaysay dhulkeeda iyo dadkeeda, waxase ay Culimada Somaliland mar walba fatwoonayeen in dagaalladaasi ay fidmo yihiin, iyagoo ku doodaya inay labo qolo oo Muslimiin ahi is laayaan inay xaaraan tahay.
Ka hor intaanan u galin weydiimo mawduucan la xidhiidha, ila dhugo labadan dhacdo taariikheed iyo labadan fatwo ee ku lammaan.
Ta koowaad, Sheekh Muxammad Bin Cabdil-Wahhaab waxa uu kaalin weyn ku lahaa aasaaskii dawladda Sacuudiga, oo ahayd goonni u goosato damacsanayd inay ka faro-baxdo Khilaafadii islaamka ee Cusmaaniyiinta. Waxay ahaayeen Maleeshiyo is urursatay oo uu Muxammad Bin Sacuud hoggaamiye u yahay, halka Sheekh Muxammad Bin Cabdil-Wahhaab na uu kitaabka u siday. Waxay taageerada hubka iyo dhaqaalaha ba ka heli jireen dawladda Ingiriiska oo iyadu ku hawllanayd bur-burinta Khilaafada Islaamka. Markii ay ku guulayteen inay gacanta ku dhigaan dhulkii Najdi la odhan jiray, waxay weerareen gobolladii kale ee Jaziiradda Carabta, waxay sidoo kale weerarro ku qaadeen mandiqadihii kale ee ay Khilaafada Islaamku ka talinaysay sida Kuweyt, Ciraaq iyo Shaam.
Ta labaad, Kolkii ay dagaalladu dhex mareen dawladaha Ciraaq iyo Kuweyt 1990 kii ilaa 1991 kii waxay rag badan oo ka mid ahaa Culimadii Sacuudiga oo uu Sheekh Cabdil-Caziiz Bin Baaz ugu horreeyaa ay fatwoodeen in dagaalkaasi uu Jihaad yahay, la dagaallanka ciidamada Ciraaq na lagu janno tegayo, sidoo kale waxay dawladda Kuweyt u fatwoodeen inay u bannaan tahay inay waddamada gaalada kaalmaysato oo ay hub iyo ciidan ba weydiisato si ay Ciraaq ula dagaallanto.
Sida aan labadan dhacdo taariikheed ku xusay, labadan Sheekh oo ay Culimadeenu u yaqaannaan labo Mujaddidu-diin, oo diinta iyo dacwadda islaamka boodhka ka tumay, fatwadoodana madaxa iyo indhaha ay ku qaattaan, kutubtoodana ay sida xoolaha u dhaqdaan, waa Sheekh Muxammad Bin Cabdil-Wahhaab iyo Sheekh Cabdil-Caziiz Bin Baaz e, waxa ay qayb ka ahaayeen dagaallo dhex maray dad muslimiin ah, oo waliba jihaad lagu janno tegayo ay ka aaminsanaayeen.
Haddaba dhowr kan qodob waa iga weydiimo aan su'aalayo culimada Somaliland.
Dagaalladii Muxammad Bin Cabdil-Wahhaab iyo Muxammad Bin Sacuud ay heshiiska ku ahaayeen ee lagula dagaallamay Khilaafadii Islaamka ee in lagu baxaa ay xaaraanta ahayd, ee ay weliba gaaladu caawinaysay, ee cududda iyo cuudka ba ay iyaga ka helayeen, ee ay ujeeddadoodu ahayd kaliya sidii ay u hantiyi lahaayeen dawlad ay iyagu maamushaan, iyo Dagaalkii SNM ay la gashay daaqiyadii weynaa ee diinta iyo dadkaba gumeeyey, ee loogu hiilinayey umaddii islaamka ahayd ee la xasuuqayey, ee maatadooda la barakicinayey, ee magaalooyinkooda la bur-burinayey, ee guryahooda la rushaynayey, ee dumarkooda la kufsanayey, ee hal-doorkooda la laynayey, labadaa dagaal kee baa Jihaad ahaa ? Kee baa se Fidmo ahaa ? Maxaa se ka Ina Cabdil-Wahhaab Jihaadka ka dhigay ka SNM na Fidmo da ka dhigay ? Maxay Muxammad Bin Cabdil-Wahhaab iyo colkiisii khilaafada islaamka la dagaallamay ay Mujaahidiinta diinta u halgamay ku noqdeen ? Halgamaagii se SNM ee u dagaallamayey difaaca iyo badbaadinta dhiigga umaddii islaamka ahayd ee xaq-darro da lagu gumaadayey, muxuu ku noqday Mujjrimka Fidmo-walaha ah ee marka Mujaahid lagu sheego laga gubanayo ? Maxaa Sacuudiga oo Ingiriis ka jaray Khilaafadii Islaamka Gooni-Isutaaggiisa xalaaleeyey ka Somaliland na xaaraantinimeeyey ?!!!.
Dagaalladii dhex maray Ciraaq iyo Kuweyt ee uu Ibnu Baaz jihaad ka ku sheegay, ee uu u fatwooday inay gaalada hub iyo ciidan ba weydiisan karaan, isagoo ku doodaya in dalka Ciraaq uu ku soo duulay dhulka Kuweyt, isagoo leh ma mabannaana in dal muslim ahi dal kale oo muslim ah uu ku duulo oo uu xuduuddiisa dhaafo (hadda la soco oo xuduudda Ciraaq iyo Kuweyt Ingiriis baa sharciyeeyaye), iyo dagaalladan ay Somaliya ku soo qaaddo dhulka Somaliland oo mar walba ay Somaliland dhulkeeda daafacayso, xuduuddeedii na aanay marnaba ka gudbin, labadaa dagaal maxay ku kala duwan yihiin ? Maxaa midna Jihaad ka ka dhigay midna Fidmo da ka dhigay ? Ibnu Baaz kii shalay sidaa fatwonayey maxaa Mujaddidu-diin ka ka dhigay ? ninka maanta yidhaahda Somaliland xudeeddeeda iyo dhulkeeda ha daafacato na aad ula soo boodaysaa dhiigga islaamku waa xaaraan ee aad naarta ula doonanaysaa ? Dhiigga islaamku horta ma Somaliland uun buu xaaraan ka yahay ? Maxaa u diiday Culimada Somaliland inay ka badheedhaan xaqiiqada ? Maxay kaga duwan yihiin Culimada Muslimiinta ee kale ee dalalkooda mar walba la jira ? Maxay Culimadeennu khudbadaha Jimcaha iyo Masaajiddada iyagoo adeegsanaya ay shacabka uga digayaan in la taageero Ciidamada Qaranka ? Xaggee ayuu ku nool yahay xillima ayuu se nool yahay wadaadka ku khudbadaynaya Muslimiintu xuduudo ma kala laha ? Maxay Culimada Somaliland uga gaabsadaan difaaca Qadiyadda iyo Qarannimada Somaliland ? Horta Culimadu Goonni-isutaagga Somaliland ma aaminsan yihiin ? Wadaaddadeennu tolow ma Somaliland ayay la jiraan mise Somaliya ayay la jiraan ?!!!.
Maxamed Kaahin Saleebaan